दसैँ बजारले बढ्यो उपत्यकामा जाम – Akhabar Dainik
दसैँ बजारले बढ्यो उपत्यकामा जाम
मङ्लबार, अशोज १८, २०७३
काठमाडौं, असोज १८ – दसैँ सुरु भएसँगै सवारीसाधनको चाप बढ्दा राजधानीमा जामको सकस बढेको छ । मुख्य चोक मात्र नभई चक्रपथ खण्डमा समेत जाम हुन थालेको छ ।
सामान्य अवस्थामै उपत्यकामा जामको समस्या हुने गथ्र्यो । पछिल्लो समय ३० प्रतिशत गाडी थपिएपछि समस्या झन् बढेको छ । ‘दसैँका लागि बुक भएका पाँच हजार गाडी थपिएका छन्,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डिआइजी प्रकाश अर्यालले भने, ‘किनमेलका लागि सबै गाडी बाहिर निस्किएकाले बजार क्षेत्रमा जाम बढेको हो ।’
न्युरोड र त्यस आसपासका सडकमा धेरै जाम हुने गरेको छ । पहिलेदेखि नै धेरै जाम हुने त्रिपुरेश्वर, टेकु सडकमा लामो समयसम्म गाडीहरू जाममा फस्ने गरेका छन् । त्यस्तै, थापाथली, माइतीघर र लैनचौर क्षेत्रमा धेरै जाम हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ‘क्रसिङमा रोकिनु जाम होइन,’ डिआइजी अर्यालले भने, ‘त्यसबाहेक केही सडकखण्डमा १०–१५ मिनेट जाम हुने गरेको छ ।’ नयाँ गाडी थपिनु, बजारमा किनमेलको चहलपहल बढ््नु र दसैँका लागि उपत्यकाबाहिरका गाडी पनि भित्रँदा जाम बढेको हो ।
दसैँ मान्न घर फर्कने बढे
दसैँ मान्न आ–आफ्ना घर फर्कने क्रममा उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । उपत्यकाको प्रमुख नाका नागढुंगाबाट आइतबार ३३ हजार यात्रु बाहिरिएका छन् । जब कि १५ हजार मात्र भित्रिएका छन् । सामान्य अवस्थामा २६ हजार हजार भित्रने र बाहिरिने गर्थे ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार आइतबार आठ हजार ६ सय ५२ गाडी बाहिरिएका छन् भने सात हजार चार सय २१ गाडी भित्रिएका छ्न । सोमबारदेखि बाहिरिनेहरू बढेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग नागढुंगाका सइ गुणनिधि खकुरेलले बताए । तैपनि उपत्यकाभित्रका सडकमा जाम बढेको छ ।
चार सयसम्म बढी भाडा असुली
दसैँको मौका छोपी केही सवारीसाधनले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने गरेको पाइएको छ । प्रहरीको अनुगमनले चाबहिलबाट पूर्वचल्ने टाटा सुमो तथा हायस गाडीले चार सय रुपैयाँसम्म बढी भाडा असुलेको खुलेको हो ।
प्रहरीले ६८ वटा टाटा सुमोबाट धेरै असुलीको भाडा फिर्ता गरेको छ । चाबहिल चोकमा ओखलढुंगा, खुर्कोट, सोलुखुम्बु, खोटाङ र काँकडभिट्टा जाने टाटा सुमो तथा हायस गाडीले यात्रु ठगी गरेका हुन् । उनीहरूले एक यात्रुबाट एक सयदेखि चारसयसम्म बढी भाडा असुलेको प्रहरीले जनाएको छ । धेरै भाडा लिनेहरूलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाइने काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विक्रमसिंह थापाले बताए । ‘यात्रु ठग्ने कसैलाई छाडिँदैन,’ एसएसपी थापाले भने, ‘बढी भाडा लिएर ठग्नेहरूको दसैँ जेलमा बित्नेछ ।’
गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रुको मृत्युडल्लुमा गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रुको मृत्यु भएको छ । डल्लुबाट टंकेश्वरतर्फ जाने सडकखण्डमा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट ६१ वर्षीया मालती देवीको मृत्यु भएको हो । दिउँसो करिब पौने ५ बजे बाटो काट्ने क्रममा बा.११च ५८४२ नम्बरको पिकअप भ्यानले उनलाई ठक्कर दिएको थियो । उपचारका लागि सोह्रखुट्टेस्थित मनमोहन अस्पताल पु¥याइएकोमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो । पिकअप भ्यान र चालकलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कुन कुन ठाउँमा हुन्छ धेरै जाम ?
न्युरोड र त्यस आसपासका सडकमा धेरै जाम हुने गरेको छ । त्रिपुरेश्वर, टेकु सडकमा पहिलेदेखि नै धेरै जाम हुने गरेको थियो । त्यस्तै, थापाथली, माइतीघर र लैनचौर क्षेत्रमा पनि धेरै जाम हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ‘क्रसिङमा रोकिनु जाम होइन,’ डिआइजी अर्यालले भने, ‘त्यसबाहेक केही सडकखण्डमा १०–१५ मिनेट जाम हुने गरेको छ ।’ नयाँ गाडी थपिनु, बजारमा किनमेलको चहलपहल बढ्नु र दसैँका लागि उपत्यकाबाहिरका गाडी पनि भित्रँदा जाम बढेको उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुली किन पुगे डोल्पा
डोल्पा । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आज यहाँको त्रिपुरा सुन्दरी......
पोखरामा ‘शालिक’ राजनीतिः अनिश्चितकालीन बन्ददेखि रिले अनशनसम्मको चेतावनी
पोखरा । पृथ्वीनारायण शाह शालिक पुनस्र्थापना संयुक्त संघर्ष समितिले......
अध्यादेशमार्फत् चिकित्सा विधेयक ल्याउने सहमतिपछि गोविन्द केसीले अनसन तोडे
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले अनसन ताडेका छन् ।......
पोखराका मुख्य केन्द्रमा सिसी टिभी जडानबारे छलफल
पोखरा । पोखरालाई सुरक्षित सहरको रुपमा विकास गर्नको लागि......
जैवीक विषादी प्रयोग गर्न किसानहरु लाई सुझाब
पोखरा । कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग कम गर्न कृषि......
सम्बृद नेपाल निर्माणको महाअभियान एमालेले मात्रै पूरा गर्न सक्षम छ – नेता अधिकारी
पाेखरा । नेकपा एमाले प्रदेश कास्की २ क को......
बेनीमा देउसी भैलोको रमझम
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी बजारमा तिहारको अवसरमा स्थानीयवासी देउसी......
‘स्मार्ट जुडिसरी’ अतिअवाश्यक : प्रधानन्यायाधीश पराजुली
रोल्पा । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले न्याय बलियो भए मात्र......